राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी संसदमा ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको हो । महाअभियोग प्रस्तावमाथि बुधबार छलफल हुने बीबीसीले जनाएको छ ।